Miteraha ambaratonga miloko ao anatin'ny segondra miaraka amin'ny Scale, fampiharana tranonkala | Famoronana an-tserasera
Scale dia rindrambaiko web hamokarana mizana amin'ny fomba matihanina
Nanjary loharanom-pitaovana tsy mety ritra ny tranonkala. Afaka mahita rindrambaiko toa an'izay isika Scale, mpamokatra refy loko tena ilaina amin'ny famolavolana matihanina na amateur amin'ny sakany rehetra.
Mizana koa miavaka amin'ny fampiantranoana ao amin'ny github, ny loharanom-pahalalana tsara indrindra ho an'ny mpamorona marobe izay ampakarany ny loharano mivelatra na ny karazany rehetra. Anisan'ireo mampiavaka azy ny safidy hamoronana tranokala ary hampiantrano azy, toy ny amin'ny Scale.
Es eto izay mamely Scale amin'ny fomba manokana, satria hatramin'ny fotoana voalohany nametrahana ny tranonkala tao anatin'ny iray segondra, dia hiseho ny interface minimalist izay mametraka ny tanjona amin'ny kaody loko.
Io kaody miloko io dia azo ovaina amin'ny sanda RGB hita eto ambany fotsiny miaraka amin'ireo sliders izay mamela antsika hanova haingana ny refin'ny loko izay novokarina indrindra tao amin'ny faritra afovoan'ny varavarankely.
Nisafidy kaody miloko sy ny famolavolana ny refy loko eo alohanay, manana sanda 8 sisa azontsika ovaina isika. Ny telo dia ho an'ny tonony maizina amin'ny refy loko namboarina, ary telo hafa ho an'ny feo maivana. Ny roa ambiny dia ho an'ny isan'ireo loko ho an'ny mazava sy ny maizina.
Amin'izany no ahafahantsika manova ireo alokaloka ireo hampiasa ny haavon'ny saturation, ovao ny zoro tonon'ny feo mba ho mahery setra kokoa na tsy azo ovaina ny refy, na mampitombo na mampihena ny haben'ny haizina na ny hazavan'ny tonony.
Ny mizana dia ahafahantsika miditra amin'ny fanaraha-maso mandroso mba hiteraka loko sy mandika amin'ny alàlan'ny fanindriana ireo feo rehetra. Tsindrio fotsiny amin'ny alàlan'ny fanindriana azy io dia hadika amin'ny solaitrabe mba hahafahantsika mametaka azy amin'izay tiantsika na ilaintsika.
Una Fampiharana tranonkala avo lenta ary amporisihinay amin'ireto andalana ireto amin'ny Creativos Online. Avelanay ianao ity fitaovana web ity hampiasa loko toa ny motera fikarohana an'ny Google.
Ny rohy: Scale
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Scale dia rindrambaiko web hamokarana mizana amin'ny fomba matihanina
NN dia hoy izy:
Ahoana no ahafahan'izy ireo tsy afaka mametraka ny rohy hitsidika ny tranonkala ... karazana bilaogy inona ity?
Valio amin'i NN
Misaotra anao roa! Nanampy ny rohy.
Azonao atao izao ny mahafantatra ny toetra amam-panahy hitanao ao amin'ny Google Art Selfie